New Zealand inoenda pasi rese kukiya pamusoro peimwe COVID-19 kesi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » New Zealand Kupwanya Nhau » New Zealand inoenda pasi rese kukiya pamusoro peimwe COVID-19 kesi
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • New Zealand Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mutungamiriri weNew Zealand, Jacinda Ardern
Kuvharirwa kwenyika kuNew Zealand kuri kukonzerwa nemazuva matatu apfuura, nepo muAuckland neCoromandel Peninsula kukiya kwacho kuchapedza svondo.
Imwe nyaya nyowani yeCOVID-19 yakataurwa muNew Zealand.
Mutungamiri weNew Zealand anozivisa kukiyiwa kwenyika yose.
New Zealand inoburitsa hutachiona mumatanho ekutanga.
Vachitaura pamusangano nevatori venhau nezuro, Mutungamiriri weNew Zealand, Jacinda Ardern akazivisa kuti kiwis ichavharirwa pasi rose 'level mana' kubva na11: 59 pm nguva yemuno (11:59 am GMT) zvichitevera kutaurwa kweNew COVID-19 kesi muAuckland.
Sekureva kwaArdern, nyaya ye coronavirus yakawanikwa muAuckland ndiyo yekutanga hutachiona hutachiona kubva munharaunda muna Kukadzi.
"Zvirinani kutanga kukwira nekudzika nhanho pane kutanga kudzikira, kusava nehutachiona uye kuriona richimhanya nekukurumidza," akadaro Prime Minister, achitaura nezve "mhedzisiro yakaipa" dzimwe nyika neAustralia iri pedyo nekusazvitsika. kubuda utachiona mumatanho ekutanga-tanga.
Kuvharwa kwenyika yose kuri kukonzerwa nemazuva matatu apfuura, nepo muAuckland neCoromandel Peninsula kukiya kwacho kuchapedza svondo. Pasi pemitemo ye 'chenjedzo yechina' - matanho akasimba kuNew Zealand - kiwis anokwanisa chete kusiya dzimba dzavo kumafamasi, zvekutengesa, kuyedzwa kweCOVID-19, kurapwa uye kwekurovedza muviri munharaunda.
Izvo zvichiri kutariswa kuti musiyano weDelta ndiwo unoitisa New Zealand yakasarudzika COVID-19 kesi.
Chiitiko chakazvimiririra ndiyo yekutanga hutachiona hutachiona hwemunyika kubva muna Kukadzi 28, ichiputsa mwedzi yayo mitanhatu isina kana nharaunda.
Mutungamiriri wehurumende akatsigira mutemo wekuvhara mhinduro nekukurumidza uye kuvharwa kwemiganhu yakasimba kuti hutachiona husapinda murudzi. Svondo rapfuura, Ardern akazivisa kuti New Zealand ichavhurazve miganhu yayo kutanga kwa2022 kana ruzhinji rwevanhu rwabaiwa jekiseni.
Kubva pakatanga COVID-19 kutanga kwegore ra2020, nyika yemamirioni mashanu yakakunda denda iri risina kumbokuvadzwa kana ichienzaniswa nedzimwe nyika, rakanyora zvinopfuura mazana maviri nemazana mashanu ezviitiko uye kufa makumi maviri nenomwe.
Harry Johnson anga ari iye mupepeti wedhisheni we eTurboNews kweanenge makore masere.
Harry anogara kuHonolulu, Hawaii uye akabva kuEurope.
Anoda kunyora uye anga achivhara seyakagoverwa mupepeti we eTurboNews.
Brunei Inorambidza Kupinda Kwese Kubva kuIndonesia Mushure mekunze ...
India - Kazakhstan Tourism uye Kufamba: Chii chinonzi ...
Jamaica Tourism Gurukota Inokurudzira Vashandi Vekushanya kuti vatore ...
Etihad Airways inowedzera Verified to Fly yekufambisa gwaro ...
Mimhanzi Haimbomira muNew Orleans, kunyangwe panguva ...
MITI Bhizinesi rinotangazve kuGuam nenjodzi ...
Delhi maresitorendi, mahotera nemabhawa vanowana zororo remutero
Canada inorambidza dzese dzakananga dzevatyairi kubva kuMorocco
India Tourism Inoodzwa muNew Scheme Level
Heathrow: Kuvharwa kweTransatlantic Ndege Kudhura UK ...
Kubhururuka Kubva kuIndia kuenda kuCanada Kunosara Hombe Aiwa
Yekutanga yekune dzimwe nyika mutyairi kubva kuIslamabad nyika pa ...
Seychelles Gurukota vanorumbidza mafambiro ekushanya e ...
Lufthansa inoendesa maAirbus A321 maviri zvachose ...
Tourism mari yakatemwa sekufamba kwakawanda kuenda kuHawaii
Volcano Advisory yakaburitswa muHawaii
Shanyira Hong Kong kuti uchengetedzwe neDancing Jellyfish
Iine anopfuura makumi mana emakumi emakumi ematanhatu emakesi eCOVID mumazuva maviri India inobvunza ...
Chiono, Simba, Mari: Iyo Africa Yekushanya Kudzoreredza ...
YekuEurope Yekutanga Yakazara Autonomous Robotaxi Service ...
Yakakosha Line-up Inovhura Global Tourism foramu muJakarta
Seychelles Tourism Gurukota rinoongorora zvidiki ...
Nyowani NYC Chiitiko Nzvimbo neNew Sales Leader
Dutu guru Olaf rinotarisa kuMexico
WTTC inoratidza zvinoshamisa kuitika kwe COVID-19 pasirese ...
Marriott Resorts muMexico inozivisa Mutungamiriri mutsva we ...
Seychelles yekugovana Climate Insights kuCOP Kuunganidza
Zurich-Montego Bay isingamise ndege yekufambisa mutambo ...
Kunonoka-nhanho yepasi rose denda rekufamba nendege richava ...